गोरखामा लाख-लाख रुपियाँको बाजी : बाबुराम जित्ने कि नारायणकाजी जित्ने ? | Lifemandu
काठमाडौँ, असोज २८ । बाम गठबन्धनबाट बाहिरिएका नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले–माओवादीसँग बदला लिने भएका छन् । बाबुराम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गोरखामा कांग्रेससँग तालमेल गरेर
गोरखा, कात्तिक २७ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएसँगै गोरखा २ मा पूर्वसहयात्री डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्ला दिन मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न घरदैलो र चुनावीसभ
बाबुराम भन्छन्, नारायणकाजीप्रति सहानुभूति छ
गोरखा, कात्तिक २०। नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक तथा गोरखा-२ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका छन् ।